लहान १ बैशाख । नयां बर्षको प्रत्येक पहिलो दिन मात्र फुल्ने फूल ! यसो सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ तर सत्य नै हो । लहानदेखि ४ किलोमिटर पश्चिम भोटिया टोल चोकदेखि दक्षिणमा रहेको ऐतिहासिक तथा प्राचीन राजा फूलबारीमा यस्तै फूल देख्न पाइन्छ ।
सो रुख फूलबारीको मध्यभागमा रहेको राजा सलहेसको गहबर (मन्दिर) सँगै टाँसिएको सो रुखमा वर्षको एकदिन एकाबिहानै फूल फुल्नु र साँझपख मौलाएर जानु आजसम्म रहस्य नै बनेको छ ।
माला आकारको सेतो फूलको थुङ्गा जस्तो देखिन्छ र साँझपख मौलाउनु खोजकर्ताका लागि अनौठो र रोचक बनेको छ । ती रुख के का हुन् ? कसरी यतिका वर्षसम्म बाँचिरहेका छन् ? भन्ने खोजको विषय बनेको । वनस्पतिविद्हरूका अनुसार छैटौँ सातौँ शताब्दीदेखि जस्ताको त्यस्तै रहेको यो रुख र अचम्मको फूलबारे कुनै ठोस जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन् ।
राजा सलहेस को थिए ? कसरी एउटा दुसाद (दलित) जातिका व्यक्ति राजा भए र राजा सलहेसको जीवनगाथासँगै सलहेस फूलबारी र वर्षको एक पटकमात्र फुल्ने फूलका बारेमा पनि एउटा रोचक तथा सत्य घटना रहेको छ ।
छैटौँसातौं शताब्दीतिर त्यसबेला मिथिला भूमिको गढ महिसोथा भन्ने ठाउँमा थियो । त्यो ठाउँ अहिले सिरहा नगरपालिकामा पर्दछ । त्यसबेला त्यहाँका सामन्त, जमिन्दार, भैरव, भूपाल, सोनम र मन्दोदरीको कोखबाट एउटा इन्द्रस्वरुप वीरबालक जयवद्र्धधन (सलहेस) को जन्म भएको थियो । सानैदेखि सौर्यवान प्रखर वुद्धिमान धनी र शौर्यशाली थिए सलहेस ।
सलहेसको समय कृषि र पशुपालनको प्रारम्भिक युग थियो । त्यसबेला उत्तरमा किराँत प्रदेश तिब्बत र भुटानतिरबाट आर्यवर्तमा अन्नबाली पशु लुटेर लान बारम्बार आक्रमण हुने गर्दथ्यो । बारम्बार हुने भोट र किराँतको आक्रमणलाई रोक्न सलहेसका बुबा भूपाल सोमदेव तरेगनागढ (हालको लहान बजारभन्दा चार किलोमिटर उत्तर तर्फ) का राजा हिन्दुपति शम्सेर भण्डारीलाई सघाउन गए ।
लहान नगरपालिकादेखि चार किलोमिटर पश्चिम दक्षिणमा १२ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको धार्मिक फूलबारीमा हारनको रुखमा वैशाख १ गतेका दिन मात्र सोनाखरी फूलमाला देखा पर्छन् र दिन ढल्दै जाँदा उक्त माला विस्तारै मौलाउँदै जान्छन् । अचम्मको उक्त फूल हेर्न भारतबाट समेत असङ्ख्य श्रद्धालु आउने र मेला भर्ने गर्दछन् ।
सिरहा जिल्लाभित्र राजा सलहेसको गाथासँग जोडिएको धार्मिकस्थलको खोजी गरी सरकारले सो संरक्षण गर्नसके राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई चिनाउन सक्ने मानव अधिकारकर्मी राजकुमार राउत बताउँछन् ।
अधिकारी राउत अगाडि थप्छन् —यो मात्र एउटा यस्तो देउता हो जसलाई सबै समुदायका मान्छेले पुज्ने गर्छन् । राजा सलहेसको गथालाई जीवन्तता दिन अहिले पनि गाउँ–गाउँमा गीत र महराइमार्फत सलहेस गाथा गाउने परम्परा जीवितै छ । आफ्ना समयमा पराकर्मकै बलमा नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने लोक देउवा सलहेसको जीवन गाथासँग जोडिएको धार्मिक तथा ऐतिहासिकस्थल सलहेस फूलबारी, मानिकद, पकरियागढ, पतारी पोखरीको विकासमा सरकारले ध्यान दिनसके यसले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित हुनुको साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ ।